भारत र पाकिस्तानलाई बर्षाको चिन्ता ! | Hamro Khelkud
भारत र पाकिस्तानलाई बर्षाको चिन्ता !
एजेन्सी – इंग्ल्यान्ड र वेल्समा जारी एक दिवसिय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आईतबार सर्वाधिक प्रतिक्षित खेल हुँदै छ । आज भारत र पाकिस्तान भिड्दै छन् । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३:१५ देखि सुरु हुने छ ।
विश्व क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तानबीच बिरलै प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । आन्तरिक विवादका कारण यी दुई देशले लामो समय देखी एक अर्कामा सिरिज खेलेका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा पाकिस्तान भन्दा भारत बलियो टोली मानिन्छ । तर पाकिस्तानले वेला वेला अप्रत्याशित नतिजा निकाल्दै विश्व क्रिकेटलाईनै आश्चर्यमा पार्दै आएको छ ।
सन् २०१७ को च्याम्पियनशीप ट्रर्फिको फाईनलमा भारतलाई १ सय ८० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पाकिस्तानले उपाधि जितेको थियो । इंग्ल्यान्डमा दुईवर्षपछि पाकिस्तान त्यहि नतिजा दोहोराउन चाहान्छ ।
यता भारत भने त्यो हारको बदला लिने सोचमा छ । त्यस यता भारत र पाकिस्तानबीच २ खेल भएका छन् । गत वर्ष एसिया कपका दुबै खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई सहजै हराएको थियो ।
विश्वकपमा पाकिस्तानले हालसम्म भारतलाई हराउन सकेको छैन । यी दुई देशबीच विश्वकपमा ६ खेल हुँदा ६ खेलमै पाकिस्तान पराजित भएको छ । त्यसैले पाकिस्तान आजको खेलमा भारतलाई हराउदै इतिहास रच्ने अवसर र चुनौती दुबै छ । प्रमुख उपाधीको दाबेदार टोली मध्य एक भारत भने इतिहासको नतिजा कायमै राख्ने दाउमा छ ।
वान डे हेड टु हेडमा भने भारत भन्दा पाकिस्तान अघि देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कुल १ सय ३१ वान डे खेल भएको छ । जसमा पाकिस्तान ७३ खेलमा विजयी हुँदा ५४ खेलमा पराजित भएको छ । चार खेलको नतिजा विहिन छ ।
जारी प्रतियोगिता भारत अपराजित छ । भारतले पहिलो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई ६ विकेटले पराजित गर्दा अष्ट्रेलियालाई ३६ रनले हराएको थियो । न्युजिल्यान्डसँग भने वर्षाको कारण रद्ध हुन पुगेको थियो ।
यता पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग ७ विकेटले स्तब्ध भएको पाकिस्तानले दोस्रो खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै इंग्ल्यान्डलाई १४ रनले हराएको थियो । श्रीलंकासँग वर्षाको कारण रद्द हुँदा चौथो खेलमा अष्टेलियासँग ४१ रनले पराजित हुन पुग्यो । शीर्ष चारमा रहेर सेमिफाईनल खेल्ने आसा कायमै राख्न पाकिस्तानलाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाब पनि रहने छ ।
ओपनर फकार जमान,बाबर आजम,मोहम्मद हफिज,सादब खान,मोहम्मद आमिर र वहाब रियाजको उत्कृष्ट प्रर्दशनमा पाकिस्तानले भारतलाई स्तब्ध पार्न सक्छ ।
भारतलाई ओपनर रोहित शर्मा,कप्तान विराट कोहली, विकेटकीपर महेन्द्र सिंह धोनी,अलराउण्डर हार्दिक पान्ड्या र तीब्र गतिका बलर जुप्रित बुमराहको प्रर्दशन निकै महत्वपूर्ण रहेने छ शिखर धवन चोटका कारण टोली बाहिर रहँदा चौथो नम्बरमा ब्याटिङ गरेका केएल राहुलले आजको खेलमा ओपनिङ गर्ने छन् । योसँगै भारतले चौथो नम्बरमा कसलाई मैदान उतार्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
जारी विश्वकपमा चार खेल वर्षाको कारण रद्द भएको छ । त्यस्तै आज भारत र पाकिस्तानबीचको खेल पनि वर्षाले प्रभावित हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आज हुने भारत र पाकिस्तानको मैदानमा पानि पर्ने संभावना देखिन्छ । जुन मैदानमा शनिवार पानी पर्दा कभर पुरै ढाकिएको छ । मैदान केहि हिलो भएको छ । जुन मैदान सुक्न ४,५ घण्टा घाम लाग्नुपर्ने इन्डिया स्पोट्सले जनाएको छ ।